Diovy ny rafitra GNU / Linux anao amin'ny Bleachbit 1.10 | Avy amin'ny Linux
Diovy ny rafitra GNU / Linux anao amin'ny Bleachbit 1.10
Vao tsy ela akory izay ny kinova vaovao an'ny Bleachbit, Ity dia a utility lampihazo miampita miaraka amin'ny vitantsika esory ny karazana rakitra tsy ilaina rehetra ao amin'ny rafitray ary mandany toerana fotsiny amin'ny kapila mangirana izahay: cache, cookies, fisie vetivety, histoire form, log chat, thumbnails, tantara misintona, hitsin-dalana tsy mety, log debug; Io koa dia hahafahantsika manararaotra bytes sasany amin'ny programa hafa toy ny Adobe Reader, APT, Firefox, VLC, Flash, GIMP, Thunderbird, Chromium, Epiphany, Filezilla, Firefox, Flash, gFTP, GNOME, Google Chrome, Google Earth, Java, KDE, OpenOffice, RealPlayer, Skype, ary ny lisitry ny hafa lava.
BleachBit dia manafaka haingana ny habaka kapila ary mpiara-miasa miaro ny fiainanao manokana ihany koa. Satria miasa toa karazana CCleaner ho an'ny Linux, fananganana rafitra fanadiovana ny mahaizy azy. Amin'ny ankapobeny, ny mpanadio tsirairay izay hitantsika amin'ny tambajotram-pifandraisana, dia maneho fampiharana toa ny Firefox na Internet Explorer ary toa ny fanadiovana ny singa sasany amin'ireo rindranasa ireo ihany no ampiasana azy, fa ny BleachBit kosa dia misy lisitra mihabe hatrany miaraka amin'ireo vokatra avy amin'ny fanadiovana ho an'ny samy hafa. asa.
BleachBit dia manome anao andiana safidy, izay manampy ny mpampiasa ary manarona ireo singa azo diovina, toy ny memory cache, ireo cookies ary ireo rakitra log (mba hitonona fotsiny ireo mahazatra indrindra). Isaky ny safidy isaky ny singa dia manomeza famaritana mba ho mora kokoa ny mandray fanapahan-kevitra tsara indrindra momba ny hetsika tokony hatao.
Amin'ny lafiny iray, mamela anao hamafa ireo rakitra rehetra izay tsy ilainao intsony izany, manafaka toerana. Amin'ny lafiny iray, làlana azo antoka izy io esory ny fisie sasany fa tsy te hitazona intsony ianao, miantoka ny fiainanao manokana.
BleachBit dia miasa tsotra, amin'ny tranga rehetra dia tsy maintsy misafidy fotsiny ny checkboxes hanamarihana izay tadiavintsika ho diovin'ny programa isaky ny rindranasa, noho izany dia manana fahalalahana lehibe kokoa isika rehefa mampiasa azy io ao amin'ny rafitray. Na izany aza, azontsika atao ihany koa ny mampiasa ny herin'ny fanadiovana rehetra amin'ny alàlan'ny tsipika baiko. Ny antsipiriany iray manan-danja dia ny isaky ny misy fisalasalana dia tsara kokoa ny mijery ny famaritana ny asa tsirairay avy ary mankasitraka tsara kokoa ny zavatra ataontsika.
Ao amin'ny fizarana fiasa mandroso Hahita fitaovana toy ilay iray ahafahantsika manadio ny habaka malalaka isika, na koa manimba ireo rakitra sy lahatahiry mba hamafana ireo karazana data tsy tsiambaratelo.
Mitondrà koa a azo antoka hamafana asa tena mitovy amin'ny zavatra ho hitantsika amin'ny fitaovana hafa toy ny hanamarinana y Fafao azo antoka; izay tena mandaitra amin'ny famafana ny fampahalalana amin'ny kapila mangarahara nentim-paharazana, na izany aza tsy mitovy amin'ny flash drive na drive solid state ny tantara.
Hiresaka momba izay entiny BleachBit 1.10 tsy afaka mijanona amin'ny fanasongadinana ireo isika vaovao:
Fanadiovana tenimiafina ao Firefox 32.
Manadio cookies ao Google Chrome
Niampy a tsanganana habe ao amin'ny interface, izay ahafahantsika mankasitraka ny habetsaky ny angona isaky ny fampiharana sy ny entana.
Fanamafisana ny famantarana ny rakitra, manome hafainganam-pandeha avo kokoa rehefa mihazakazaka ny programa.
Nampiditra famaritana vaovao.
Malalaka hizara, hianatra ary hanova (loharano misokatra).
Ho an'ny linux Nanampy toerana maro kokoa izy ireo hahafahany manadio azy ireo, ary nanamboatra bibikely marobe izay mifandraika amin'ny Ubuntu 15.10 ihany koa, satria ny Mandriva efa tsy miasa intsony dia tsy hotohanana intsony ary ny fanampiana an'i Fedora dia nitarina (amin'ny lafiny rehetra amin'ireo fonosana RPM).
Bleachbit 1.10 voasoratra ao amin'ny Python, multiplatform izy io fa indrindra rindrambaiko maimaim-poana, mazava ho azy ny marary mitsika ho an'ny lehibe Fizarana GNU / Linux.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Diovy ny rafitra GNU / Linux anao amin'ny Bleachbit 1.10
Tena tsara. Tolo-kevitra tena azo ekena.
Fanehoan-kevitra fanampiny, amin'ny maody maody dia miasa tanteraka izy io, amin'ny maody mpampiasa dia hadinony ny manome anao ny statistika, mihidy izy rehefa vita.
Ah eny, nampitaina tamin'ny teratany, io no baomba. Ny programa dia efa mampitandrina anao fa miankina amin'ny safidy dia miadana izy, fa ny kaody fototra dia mora miova. Ny asa dia omen'ny interface interface izay miankina amin'ny biraonao tsirairay. Torohevitra iray, Qt na WxWidgets izay miandany na miandany amin'ny birao ary atambatra amin'ny C, C ++ dia hanatsara zato isan-jato.
Averiko, atoro ahy